Ciidamada Nabad Suggida Maamulka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay rag lagu eedeeyey in ay qaraxyo waday – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Nabad Suggida Maamulka Jubbaland ayaa Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose, waxa ay ku qabteen rag doonaayay inay qaraxyo ka geystaan Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamulkaasi.
Xogo ay heleen ciidamada Nabad Suggida Jubbaland, ayaa lagu fashiliyay raggaasi, kadib markii ciidamada ay howlgal qorsheysan ku qaadeen gurigii ay ku dhuumanayeen raggaasi doonaayay inay dhibaatada ka geystaan Magaalada Kismaayo.
Waxa ay soo qabteen ciidamada labo nin oo lagu sheegay inay yihiin raggii diyaarinaayay qaraxyada iyo qalab la sheegay in lagu diyaarinaayay qaraxyada, waxaana laga soo qabtay raggaan Xaafada Dalcada ee Magaalada Kismaayo.
Howlgalkaan oo xalay dhacay ayaa wararka waxa ay sheegayaan in labadii nin ee lagu soo qabtay la geeyay Saldhig ay maamulaan ciidamada Nabad Suggida oo ku yaallo Magaalada Kismaayo, waxaana ku socda baaritaano adag.
Ciidamada Nabad Suggida Jubbaland ayaa sidoo kale xalay waxa ay howlgalo ka sameeyeen wadooyinka Magaalada Kismaayo, gaar ahaan Isgoysyada oo dadka iyo gaadiidka ay ku baarayen.
Xoogaga Shabaab ayaa isku daya si kasta oo ay u fulin karaan qaraxyo ay ka geystaan Magaalada Kismaayo.
Ammaanka Magaalada Kismaayo ayaa wuxuu yahay mid hagaagsan, iyadoo ciidamada ay kordhiyeen gaafmeerka ay ugu jiraan xaqiijinta ammaanka.